Owayenguzakwethu onelungelo lesondlo akafuni ukusebenza | Law & More
Blog » Owayengumlingani onelungelo lesondlo akafuni ukusebenza
ENetherlands, ukunakekelwa kungumnikelo wezezimali ezindlekweni zokuphila zalowo owayengumlingani wakho nanoma yiziphi izingane ngemuva kwesehlukaniso. Yimali oyitholayo noma okufanele uyikhokhe njalo ngenyanga. Uma ungenayo imali eyanele yokuzondla, unelungelo lokuthola isondlo. Uma unayo imali eyanele yokuzondla kodwa lowo owawungumlingani wakho engenayo, kungadingeka ukuthi ukhokhe imali yesondlo. Kucatshangelwa nezinga lempilo ngesikhathi somshado. Umklomelo wokusekelwa ngumlingani ususelwa esidingweni seqembu elinelungelo nasemandleni weqembu elibophezelekile. Ngokwenzayo, lokhu kuvame ukuba yingxoxo phakathi kwamaqembu. Kungenzeka ukuthi lowo owayengumlingani wakho afune imali yesondlo ngenkathi yena empeleni ezisebenza. Ungakuthola kungalungile lokhu, kepha yini ongayenza esimweni esinjalo?
Umuntu ofuna ukuxhaswa ngumlingani kumele akwazi ukufakazela ukuthi akanakho noma akanamali eyanele yokuzondla nokuthi naye akakwazi ukwenza leyo mali. Uma unelungelo lokuxhaswa ngumlingani, okuqalayo ukuthi kufanele wenze konke okusemandleni akho ukuze uzondle. Lo msebenzi ususelwa emthethweni futhi ubizwa nangokuthi isibopho somzamo. Kusho ukuthi lowo owayengumlingani onelungelo lokuthola imali yesondlo kulindeleke ukuthi afune umsebenzi ngesikhathi athola ngaso imali yesondlo.
Isibopho sokwenza umzamo siyisihloko samacala amaningi ekusebenzeni. Iqembu elibophezelekile livame ukuba nombono wokuthi iqembu elinelungelo lingasebenza futhi likhiqize imali ngaleyo ndlela. Ngokwenza njalo, iqembu elibophezelekile livame ukuthatha isikhundla sokuthi umamukeli kufanele akwazi ukuthola imali eyanele yokuzondla. Ukusekela umbono wakhe, iqembu elibophezelekile lingaletha ubufakazi, ngokwesibonelo, izifundo noma izifundo ezilandelwa ngumamukeli nemisebenzi etholakalayo. Ngale ndlela, iqembu elibophezelekile lizama ukwenza kucace ukuthi akukho sondlo okuzodingeka sikhokhwe, noma okungenani okuncane ngangokunokwenzeka.
Kulandela emthethweni wamacala ukuthi isibopho salowo obolekayo wesondlo ukwenza umzamo wokuthola umsebenzi akufanele sithathwe kalula. Okweletwayo wesondlo kufanele afakazele futhi afakazele ukuthi wenze imizamo eyanele yokwenza amandla (amaningi) okuhola. Ngakho-ke, okweletwayo wesondlo kuzofanele akhombise ukuthi uyaswele. Okushiwo ukuthi 'ukukhombisa' nokwenza 'imizamo eyanele' kuhlolwe ngokusebenza ecaleni ngalinye.
Kwezinye izimo, okweletwayo wesondlo akakwazi ukubanjwa kulesi sibopho somzamo. Lokhu kungavunyelwana ngakho esivumelwaneni sehlukaniso, isibonelo. Ungacabanga futhi ngalesi simo esilandelayo esivele senzeka: amaqembu ahlukanisile futhi umyeni kufanele akhokhe isondlo sozakwethu nengane. Ngemuva kweminyaka engu-7, ucela inkantolo ukuthi yehlise imali yesondlo, ngoba ucabanga ukuthi lona wesifazane usezokwazi ukuzondla manje. Ngesikhathi kulalelwa icala kuvele ukuthi lezi zithandani bezivumelene ngesikhathi sehlukaniso ukuthi lona wesifazane uzonakekela izingane nsuku zonke. Zombili lezi zingane zazinezinkinga eziyinkimbinkimbi futhi zazidinga ukunakekelwa kakhulu. Owesifazane wasebenza cishe amahora ayi-13 ngesonto njengomsebenzi wesikhashana. Njengoba wayenolwazi oluncane lomsebenzi, ngokwengxenye ngenxa yokunakekelwa kwezingane, kwakungelula ngaye ukuthola umsebenzi onomphela. Imali ayitholayo njengamanje yayingaphansi kwezinga losizo lomphakathi. Ngaphansi kwalezi zimo, owesifazane bekungadingeki ukuthi afeze ngokugcwele isibopho sakhe sokwenza umzamo nokwandisa umsebenzi wakhe ukuze angabe esathembela ekusekelweni ngumlingani.
Isibonelo esingenhla sikhombisa ukuthi kubalulekile ukuthi umuntu obophezelekile abheke ukuthi ngabe umamukeli uyasifeza yini isibopho sakhe sokwenza umzamo wokwenza imali. Uma ubufakazi bukhombisa okuphambene noma uma kungaba khona okunye ukusola ukuthi isibopho sokwenza imali asihlangatshezwa, kungaba ukuhlakanipha ukuthi lowo obophezelekile aqale inqubo yezomthetho ukuze kuphinde kuhlolwe isibopho sesondlo. Abameli bethu abomthetho abanolwazi bazokujabulela ukukwazisa ngesimo sakho futhi bakusize ezinkambisweni ezinjalo.
Ngabe unemibuzo mayelana nesondlo noma ufisa ukufaka isicelo, ukushintsha noma ukuqeda isondlo? Bese uthinte abameli bomndeni ku Law & More. Abameli bethu bakhethekile (ku) ekubaleni imali yesondlo. Ngaphezu kwalokho, singakusiza ezinqubweni zokugcina zesondlo. Abameli ku Law & More bangongoti emkhakheni wezomthetho womuntu siqu nowomndeni futhi bazokuthokozela ukukuqondisa kule nqubo, mhlawumbe kanye nomlingani wakho.
Thumela Previous Ayini amalungelo akho njengomqashi?